မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး ( A.B.M.A ): သံဃာ့အဖွဲ့ချုပ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထုတ်ပြန်ချက်
It is Just beginning
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း နယူးယောက်တွင် ရှု...
မြင်းခြံ မှာ လူငယ် ၄ ဦးကို ထပ်္ဘပီး ဖမ်းဆီးသွား
အရှင်ဆန္ဒာဓိက ႟ိုက်နှက်ဒဏ်ကြောင့် ခွဲစိတ်ကုသရမည့် ...
သံဃာတော် ၂၄၀ ထောင်ခဵခံနေကြရကြောင်း HRW ပြောကြား
သံဃာတွေကို အကြမ်းဖက်ခဲ့တာ မမေ့ဖိုႛ ဆေးနီပက်ဖြန်း
လူငယ်အဖွဲႚမဵား စုပေၝင်း ဝတ်ပြုဆုတောင်း
ဆန္ဒပြပွဲ( ၂၃-၉-၀၉ )
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး (၂) နှစ်ပြည့်
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ( ဓမ္မဃောသက)
သစ္စာဓိဋ္ဌာန်ပြု ဆုတောင်းရခြင်း (သို့) ထိရောက်အောင် ဆ...
ကြေညာချက်နှင့် သစ္စာဓိဋ္ဌာန် ( ၁၀-၉-၀၉ )
ဗိုလ်မှုး အောင်လင်းထွဋ် က ဗိုလ်ချုပ်ရွှေမန်းသို့ ပေး...
သံဃာ့အဖွဲ့ချုပ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထုတ်ပြန်ချက်
ကြေညာချက်( ၅-၉-၀၉ )
အကောင်း အဆိုး သိကြလားဟေ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြီးယင် နယ်ခြားမစောင့်တဲ့ ပုဂ္ဂို...
စည်ပင်သာယာက ရေမီတာတပ်ခိုင်းပြီး အခွန်ထပ်ကောက်မည့်အ...
နအဖ ဆိုတဲ့ (အ)နူ ကလီးယား
အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိသူ
SWA Interviews Monk from Burma's Saffron Revolutio...
U Pyinya Zawta
နအဖဟာ မိစ္ဆာဒိဌိပီပီ ယုတ်မာမှုကတော့ ကမ်းကုန်တယ်။
ရွှေဝါရောင်နှင့် သာသနာ့ တက္ကသိုလ်
သံဃာအဖွဲ့ချုပ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်း တွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံရေးအင်အားစု(၁၄) ဖွဲ့မှ လက်ရှိတည်ဆဲ စစ်အစိုးရအား ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ပြီး မြန်မာတစ်ပြည်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုကြီး ဖြစ်ပေါ် လာစေရေး အတွက် ဖွဲ့စည်း ထားသော အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုကြီး အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ရေးကော်မတီ မှ တပ်မတော်ထဲက အရာရှိ ၊ အရာခံ ၊ အကြပ် ၊ တပ်သားအားလုံးနှင့် နအဖ စစ်အုပ် ချုပ်ရေး ယန္တရားအတွင်း ပါဝင်အမှုထမ်းနေကြသည့် အမျိုးကောင်းသား ၊ အမျိုး ကောင်းသားသမီး အားလုံးထံသို့ အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးတွင် သံဃာတော်များ၊ ကျောင်းသား / ကျောင်းသူများ နှင့် ပြည်သူ/ပြည်သားများ ဘက်မှ ရပ်တည်ပေးရန် အိတ်ဖွင့် ပေးစာအား ပြည်တွင်းမှ တည်ရှိသော သံဃာအဖွဲ့ချူပ် - မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် နိုင်ငံရေး အင်အားစု (၁၄) ဖွဲ့မှ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမနေ့ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့အား ဂုဏ်ပြုသော အနေဖြင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (၁၃) ခု နှင့် လက်အောက် ခံ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့(၆၅) ခု၊ ၀န်ကြီးဌာန(၃၁) ခု နှင့် လက်အောက်ခံ ရုံးဌာန (၉၃) ခု ၊ပြည်နယ် ၊ တိုင်း ၊ ခရိုင် ပြည်ခိုင်းဖြိုးရုံး (၄၀၅) ရုံး ထံသို့ စာတိုက်မှ တဆင့် ယနေ့ ( ၉ . ၉ . ၀၉ ) ရက်စွဲဖြင့် ပေးပို့ပြီး မန္တလေးမြို့ ရန်ကင်းတောင်တော်တွင် သံဃာအဖွဲ့ချုပ် - မြန်မာနိုင်ငံ သံဃာ ( ၁၅ ) ပါးနှင့် နိုင်ငံရေးအင်အားစု (၁၄) ဖွဲ့မှ လူပုဂ္ဂိုလ် (၃၀) ဦးမှ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ အတွက် မေတ္တာပို့အမျှဝေခြင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် မောရသုတ်တော် ရွတ်ဖတ် ခြင်းများပြုလုပ်ကြသည် ။ ထို့အပြင် သံဃာအဖွဲ့ချုပ် - မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆွမ်းခံ သံဃာ (၉) ပါးမှ မန္တလေးတောင်တော် ပေါ်တွင် မိမိတို့ ဆွမ်းခံပြီး ရရှိလာသော သပိတ် (၉) လုံးမှ ဆွမ်းတော်များအား ဘုရားရှင်အား ရည်စူးကပ်လှူပြီး ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ အတွက် မေတ္တာပို့ အမျှဝေခြင်းများ ပြုလုပ်ကြကြောင်း GAB အဖွဲ့ဝင်များအား သိစေ အပ်ပါသည်။
http://www.khitpyaing.org/news/Sep09/90909d.php ယခု လင့်သည် ယနေ့ သံဃာအဖွဲ့ချုပ် - မြန်မာနိ်ုင်ငံ ၏ လှုပ်ရှားမှုအား ခေတ်ပြိုင် သတင်း စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော လင့် ဖြစ်သည်။
သံဃာအဖွဲ့ချုပ် - မြန်မာနိုင်ငံ
Posted by Sanghaalliance at 4:00 AM